Xulka qaranka Soomaaliya oo caawa la ciyaaraya dhiggooda Jabuuti – Gool FM
(Jabuuti) 22 Luulyo 2019. Xulka qaranka Soomaaliya ayaa maalintii shalay ka ambabaxay magaalada Muqdisho iyadoo gaaray dalka aynu dariska nahay ee Jabuuti, halkaasoo ay ku ciyaari doonaan kulan ka tirsan tartanka Chan Cup.
Xulkeenna Soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe diyaar-garow adag ka waday garoonka farsamada xiriirka kubadda cagta ee Jaamacadaha, iyadoo xiriirka kubadda cagtuna sanadkan ay xoogga saarayaan sidii xulku guulo uga soo hoyn lahaa sanadkan tartanka uu ka qeyb-galayo, iyagoo u keenay macallin ka soo jeeda dalka Ghana.
Ka hor inta aysan ciyaarin kulankooda ugu horreeya tartanka Chan Cup oo ay la ballansan yihiin Uganda waxay caawa waxa ay la ciyaari doonaan kulan saaxiibtinnimo oo istijaabin ah dhiggooda Jabuuti, iyadoo la xusuusto in kulankii ugu dambeeyey ee ay kulmaan Soomaaliya iyo Jabuuti uu xulkeenna ku soo adkaaday 4-1.
Caadiyadan waxaa tartankan Chan Cup ciyaara xiddigaha kubadda cagta ee ka dheela horyaallada dalalkooda, waxaana lugta hore ee tartankan uu xulkeenna Soomaaliya la ciyaari doonaa dalka Uganda.
Waxaana kulankan u dhexeeya Soomaaliya iyo Uganda uu ka dhici doonaa dalka Jabuuti sida qorshuhu yahay 27 bishaan July, halkaasoo ay xulkeennu guri ahaan ugu dheeli doonaan (Home).
Ciyaaryahan Faysal Axmed ayaa la xusuustaa inuu saddexleey ka dhaliyey xulka Jabuuti kulan saaxiibtinnimo oo dhacay sanadkan gudihiisa, xilli uu caawa markale ka hortagi doono dalkaasi.
Si kastaba ha ahaatee, xulkeenna qaranka Soomaaliya sanadkan waxa ay u muuqdaan kuwo laga fili karo inay natiijooyin wax ku ool ah ka soo hooyaan tartankan, maadaama ay diyaar-garow adag galeen, isla markaana xulka kabtan looga dhigay oo uu hoggaamin doono ciyaaryahan C/casiis Catoosh.